Uvimba waBafundi »Yunivesithi yaseHodges
Ukwazi ke ngoko akwaziyo ngoku - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul Kudala ngaphambi kokuba uMartha “Dotty” Faul abhalise kwiDyunivesithi yaseHodges, uchithe iminyaka ephantse ibe ngama-20 esakha ikhondo lokwenza umsebenzi wezomthetho kwiOfisi yoSheriff yeDeSoto County nakwiOfisi yeCherlotte County Sheriff. Ukusuka ekusebenzeni kwindlela yokujikeleza njengesekela-sheriff ukusingatha uphando lolwaphulo-mthetho [...]	Funda Okuninzi
Ukutyhala ngokuThintela - uSteffanny Golding uqhubeka ngaphezulu kwayo yonke ifiziksi edumileyo kunye nosokhemisi uMarie Curie wakhe wathi, “Ubomi abukho lula nakubani na kuthi. Kodwa kuthekani ngaloo nto? Kuya kufuneka sinyamezele kwaye, ngaphezulu kwako konke, sizithembe. Kufuneka sikholelwe ukuba sinesiphiwo sento ethile, kwaye le nto, nokuba kungayiphi na indleko, [...]	Funda Okuninzi
Ukufunda ukukhokela kulo naliphi na inqanaba
Ufundwe njani ukukhokela uMcimi-mlilo omnye kuHodges Ngaba wakha wawathetha la mazwi, "Akukho iiyure zaneleyo emini" xa ujonga ikhalenda yakho? Iyure nganye inomsebenzi owahlukileyo okanye uxanduva, kwaye ukuba unethamsanqa, iiyure ezimbalwa zinikezelwe ukulala. Kungalula ukucinga ukuba [...]	Funda Okuninzi
Iindlela ezintandathu zokuba nempumelelo kuMboniso wezeMisebenzi
Iindlela eziNtandathu zokuba nempumelelo kuMboniso waMakhondo NguJama Thurman, uManejala weeNgcebiso kunye neeNkonzo zaMakhondo Ukuhamba kumdlalo wobulungisa kungabonakala kungumsebenzi otyhafisayo. Ungangomnye wabaviwa abaninzi abakhuphisana nokuqwalaselwa ngumqeshi, kodwa unokufumana inzuzo ngaphezulu kwabanye ngokulandela ezi zikhokelo zomsebenzi [...]	Funda Okuninzi
Ubomi beZinto zokuqala ukuba elinye igqala lomfundi lazifezekisa njani iinjongo zakhe ngokufumana i-Life of Firsts. Ukuba u-Edward Davis unokukhetha igama elinye ukuzichaza, "beliqhutywa." Ukusuka kubomi basemkhosini, ukuya kwisidanga sokuqala kwisidanga sokuqala ekholejini kunye nokuqhubeka nezinto zakhe zemfundo kwinkqubo yenkosi, ukulawula eyakhe [...]	Funda Okuninzi